Hiconcil (ဟိုင်ကွန်ဆေးလ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Hiconcil (ဟိုင်ကွန်ဆေးလ်)
Hiconcil (ဟိုင်ကွန်ဆေးလ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Hiconcil (ဟိုင်ကွန်ဆေးလ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Hiconcil (ဟိုင်ကွန်ဆေးလ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Hiconcil ဟိုင်ကွန်ဆေးလ် ဟာ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေကို ချေမှုန်းပစ်နိုင်တဲ့ ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးတမျိုး ဖြစ်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါ ကူးစက်ပိုးဝင်ခြင်းအမျိုးမျိုးအတွက် အများဆုံးအသုံးပြုလေ့ ရှိပါတယ်။
အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ (နမိုးနီးယား၊လေပြွန်ရောင်ခြင်း၊အာသီးရောင်ခြင်း၊လည်ချောင်းရောင်ခြင်း၊အသံအိုးရောင်ခြင်း၊နားပြည်ယိုခြင်း စသည်)။
ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ (ဆီးအိမ်ရောင်ခြင်း၊ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်း၊ဆီးအိမ်အဝရောင်ခြင်း၊ဆီးပူညောင်းကျရောဂါခံစားရခြင်း စသည်)။
hiconcil ကို အခြားသော ကူးစက်ပိုးဝင်ခြင်းတွေအတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်သေးတဲ့အတွက် အသေးစိတ်ထပ်မံသိရှိလိုတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေထံ မေးမြန်းသင့်ပါတယ်။
Hiconcil (ဟိုင်ကွန်ဆေးလ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
hiconcil ကို နေ့စဉ်အချိန်မှန်မှန်သောက်ရပါမယ်။amoxicillin ပုံစံအချို့ကို အစာရှိသည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။amoxicillin ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်း တိကျစွာ လိုက်နာသုံးစွဲရမှာဖြစ်ပြီး အညွှန်းစာရွက်မှာ ရေးထားတာတွေကိုလည်း ဂရုတစိုက်လိုက်နာရမှာပါ။ ဆေးပမာဏ ပိုသောက်တာ၊လျှော့သောက်တာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ညွှန်ကြားထားတဲ့ကာလထက်ပိုပြီး ကြာရှည်စွဲသောက်တာမျိုးတွေကို မပြုလုပ်ရပါဘူး။
Hiconcil (ဟိုင်ကွန်ဆေးလ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Hiconcil ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ hiconcil ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
hiconcil ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Hiconcil ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Hiconcil ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Hiconcil (ဟိုင်ကွန်ဆေးလ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Amoxicillin ဟာ ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေရဲ့ အာနိသင်ကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆေးသုံးစွဲနေစဉ်ကာလမှာ တားဆေးသောက်ရက်နဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိသွားတာမျိုးကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ဟော်မုန်းမပါတဲ့ ပဋိသန္ဓေတားဆေးတမျိုးမျိုး (ကွန်ဒုံး၊diaphragm လို့ခေါ်တဲ့ မိန်းမကိုယ်တွင်းထည့် သားဆက်ခြားပစ္စည်းလေးတမျိုး ဒါမှမဟုတ် သုတ်ကောင်တွေကို သတ်ပေးနိုင်တဲ့ လိမ်းဆေး အစရှိတာတွေ)ကို သုံးစွဲရပါမယ်။
Amoxicillin ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့ ကာလအတိုင်း ဆေးပတ်လည်အောင် ပြည့်ပြည့်ဝဝ သောက်ရပါမယ်။ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေ အားလုံးကို အကုန်အစင် မရှင်းလင်းရသေးသည့်တိုင် သင့်ရောဂါလက္ခဏာတွေဟာ သက်သာလာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးအချိန်မှာ ရောဂါအရှင်းပျောက်သွားပြီဆိုပြီး ဆေးသောက်ရပ်လိုက်တာမျိုးမလုပ်ဘဲ ညွှန်ကြားထားတဲ့ကာလအတိုင်း သောက်ရမှာပါ။Amoxicillin ဟာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရောဂါတွေ (သာမန်အအေးမိခြင်း၊တုပ်ကွေး စသည်)ကို ကုသပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။(ရောဂါလက္ခဏာတွေ တူနေသည့်တိုင်) ဤဆေးကို အခြားလူတယောက်ယောက်နဲ့ မျှဝေသုံးစွဲတာမျိုး မပြုလုပ်ရပါဘူး။
ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးတွေဟာ (ကူးစက်ပိုးအသစ်ဝင်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတခုဖြစ်တဲ့) ဝမ်းလျှောဝမ်းပျက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဝမ်းအရည်တွေသွားနေပြီ ဒါမှမဟုတ် ဝမ်းထဲသွေးနဲ့အကျိအချွဲတွေပါလာပြီဆိုရင်တော့ Amoxicillin သုံးစွဲခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်ပြီး ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ပြသင့်ပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ အရင်မတိုင်ပင်ဘဲ ဝမ်းပိတ်ဆေးတွေ မသောက်ရပါဘူး။
Amoxicillin ကို သုံးစွဲနေစဉ်ကာလမှာ မကြာခဏဆိုသလို သွေးစစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် ကျောက်ကပ်နဲ့ အသည်းတို့ကိုလည်း စစ်ဆေးရပါမယ်။
တကယ်လို့ သင်ဟာ ဆီးပူညောင်းကျရောဂါခံစားနေရလို့ ကုသမှုခံယူနေရတယ်ဆိုရင် အခြားသော လိင်မှတဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါတွေ (ကာလသားရောဂါအပါအဝင်) ရှိမရှိကို သင့်ဆရာဝန်က စစ်ဆေးဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဟာ အစာအိမ်အနာကို ကုသဖို့အတွက် amoxicillin အပြင် clarithromycin နဲ့/ဒါမှမဟုတ် lansoprazole တို့ကိုပါ သုံးစွဲနေရရင် ဆေးတွေအားလုံးကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်း သုံးစွဲရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးတွေနဲ့ အတူပါဝင်လာတဲ့ အညွှန်းစာရွက်တွေကိုလည်း ဂရုတစိုက်ဖတ်ရှုရပါမယ်။ ဆေးပမာဏ ဒါမှမဟုတ် သုံးစွဲရမယ့် အကြိမ်ရေကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားခြင်းမရှိဘဲ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ပြောင်းလဲတာမျိုး မလုပ်ရပါဘူး။
ဆေးကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့ ကာလအတိုင်း ဆေးပတ်လည်အောင် ပြည့်ပြည့်ဝဝ သောက်ရပါမယ်။ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေ အားလုံးကို အကုန်အစင် မရှင်းလင်းရသေးသည့်တိုင် သင့်ရောဂါလက္ခဏာတွေဟာ သက်သာလာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးအချိန်မှာ ရောဂါအရှင်းပျောက်သွားပြီဆိုပြီး ဆေးသောက်ရပ်လိုက်တာမျိုးမလုပ်ဘဲ ညွှန်ကြားထားတဲ့ကာလအတိုင်း သောက်ရမှာပါ။Amoxicillin ဟာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရောဂါတွေ (သာမန်အအေးမိခြင်း၊တုပ်ကွေး စသည်)ကို ကုသပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီဆေးဟာ အချို့သော စစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုတွေကို ရလာဒ်အမှားအယွင်းတွေဖြစ်စေနိုင်တာမို့ သင့်အနေနဲ့ amoxicillin သောက်သုံးလျက်ရှိကြောင်း ဆရာဝန်ကို ကြိုတင်အသိပေးထားရပါမယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Hiconcil (ဟိုင်ကွန်ဆေးလ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Hiconcil (ဟိုင်ကွန်ဆေးလ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
လျှာ ရောင်ရမ်းဖောင်းကားခြင်း၊အရောင်မည်းခြင်း၊အမွှေးများပေါက်ခြင်း စတာတွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါ အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာရင် ဆရာဝန်ကို အမြန်အကြောင်းကြားပါ။
ခန္ဓါကိုယ်အနှံ့ကို အပ်နဲ့ထိုးနေသလို ခံစားရခြင်း။
(နှာခေါင်း၊ပါးစပ်၊မိန်းမကိုယ် သို့မဟုတ် စအိုတို့မှ) ပုံမှန်မဟုတ်သော သွေးယိုစီးခြင်း။
ပြင်းထန်သော အရေပြားတုံ့ပြန်မှုများ ခံစားရခြင်း။
အဖုအပိန့်များထွက်ခြင်း၊အသက်ရှုရခက်ခဲခြင်း၊မျက်နှာ၊နှုတ်ခမ်း၊လျှာ သို့မဟုတ် လည်ချောင်း ရောင်ရမ်းခြင်း စသည့် amoxicillin နှင့် ဓါတ်မတည့်သော လက္ခဏာများပေါ်ပေါက်လာပါက အရေးပေါ်ဆေးကုသမှုကို အမြန်ခံယူရပါမည်။
ဘယ်ဆေးတွေက Hiconcil (ဟိုင်ကွန်ဆေးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Hiconcil ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
hiconcil နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်တဲ့ဆေးတွေက အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ကြပါတယ်။
 Ampicillin (Omnipen, Principen)
 Dicloxacillin (Dycill, Dynapen)
 Oxacillin (Bactocill)
 Penicillin (Beepen-VK, Ledercillin VK, Pen-V, Pen-Vee K, Pfizerpen, V-Cillin K, Veetids),
 Cephalosporins —-> Omnicef, Cefzil, Ceftin, Keflex, and others
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Hiconcil (ဟိုင်ကွန်ဆေးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Hiconcil က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Hiconcil (ဟိုင်ကွန်ဆေးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Hiconcil ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးတွေသောက်လို့ ဝမ်းလျှောတာမျိုး အရင်ကဖြစ်ဖူးခြင်း။
သွေးယိုစီးခြင်း ဒါမှမဟုတ် သွေးခဲခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ရှိခြင်း။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Hiconcil (ဟိုင်ကွန်ဆေးလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် ၄၀ ကီလိုထက်ပိုတဲ့ ကလေးတွေအတွက်
သတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏ — တခါသောက်ရင် ၂၅၀ – ၅၀၀ မီလီဂရမ် နှုန်းနဲ့ တနေ့ကို သုံးကြိမ်သောက်ရပါမယ်။ ပိုမိုပြင်းထန်တဲ့ ကူးစက်ပိုးဝင်ခြင်းတွေအတွက် ပမာဏအများဆုံး ၅၀၀ မီလီဂရမ် အထိသောက်နိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Hiconcil (ဟိုင်ကွန်ဆေးလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက် ၁၂ နှစ်အထက် ကလေးများအတွက် (၄၀ ကီလို)း သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပမာဏက ၅၂၅ – ၁၁၂၅ ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၇ နှစ်အထက် ကလေးများအတွက် (၂၃ ကီလို) းသတ်မှတ်ထားတဲ့ ပမာဏက ၃၇၅ – ၇၅၀ ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၁ နှစ်အထက် ကလေးများအတွက် (၁၀ ကီလို)း သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပမာဏက ၁၈၇ – ၃၇၅ ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။
Hiconcil (ဟိုင်ကွန်ဆေးလ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
hiconcil ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
သောက်ဆေးတောင့် : Amoxicillin Trihydrate 250 mg
သောက်ဆေးတောင့် : Amoxicillin Trihydrate 500 mg
သောက်ဆေးအရည် : Amoxicillin Trihydrate 125 mg /5ml
သောက်ဆေးအရည် : Amoxicillin Trihydrate 250 mg /5ml
သောက်ဆေးအရည် : Amoxicillin Trihydrate
Hiconcil ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
ydrate. Accessed November 30, 2016
Hiconcil. http://home.intekom.com/pharm/bm_squib/hiconcil.html. Accessed
Amoxicillin. https://www.drugs.com/amoxicillin.html. Accessed November 30,